အခွံများနှင့် လူ | ZAYYA
← Excellent WordPress Security Tips & Plugins
Drupal! Drupal! Drupal! →
တစ်ညလုံး မအိပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ မအိပ်ဖြစ်တာ ဒါနဲ့ဆို သုံးညရှိပြီ။
ရာသီဥတုကလည်း အေးတယ် တဲ့ ။ အခြားသူ တော်တော် များများမှာ အနွေးထည်ကိုယ်စီ ရုံထားကြတယ်။ ဒီအချိန် အိပ်ရာ ထဲမှာ စောင် ထူထူခြုံပြီး နွေးနွေးလေး နေကြရင်ကောင်းမယ် လို့ ပြောတဲ့သူ လည်း ရှိတယ်။ IC4 ပလက်ဖောင်း ဘောင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး သီချင်းဆို ရင်ဖွင့် ချင်သူလည်း ရှိတယ်။ ကော်ဖီ တစ်ခွက်နဲ့ ဆေးလိပ်တစ်လိပ်ခဲပြီး အေးတာ ချမ်းတာ အာရုံ မရောက်တဲ့သူလည်း ရှိတယ်။ ညီတစ်ယောက်က သူ့ချစ်သူလေးအတွက်တဲ့ ။ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက် ဆိုလား ပြောတော့.။ အဆင်ပြေနေပုံရတဲ့ သူတို့ ချစ်သူတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဖြေ မထွက်လာကြတာနေမယ်။ ဂစ်တာကောက်ကိုင်ရင်း လက်ကွက် စမ်းလိုက်တယ်။ အလိုလို ခတ်မိသွားတာက “ဝန်ခံလိုက်ပေါ့” သီချင်း ။ သီချင်း ပေါ် Feel မရောက်သွားပေမယ့် ခံစားနေရတဲ့ ညီ-သူ့နေရာကို ခဏဝင်ကြည့်ပြီး ဆိုဖြစ်သွားတယ်။
သူတို့လေးတွေတော့ ဟုတ်ကြပြီ။ ငါရော…….။
ငါကတော့ သီချင်းမဆိုချင်ဘူး ။အသံမပါတဲ့ ကဗျာပဲ ရွတ်မယ်။
ရှုပ်ထွေး ပွေလီနေပြီး အားလုံး ကသောကမျော
လှုပ်ရှားနေတယ် ………နို့ပေမယ့် မိုက်တိမိုက်ကန်း
တကယ်က အသိုင်းပျောက် အဝိုင်းပျောက်
အထီးကျန် တစ်ကိုယ်တည်း ။
တစ်ယောက်ကပြောတယ်။ လက်တွေ့ကျကျတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါတဲ့။
နှင်းရေစွတ်နေတဲ့ ရှေ့ ထင်းရှူပင်ဖျားတွေလို
တိတ်တိတ်ကလေး ဝင်ထွက် သွားတဲ့
ဂီတ ပျောက်အောင် လွမ်းတယ်။
Filed under mood, poem Tagged with ကဗျာ, ဂီတ, feel, IC4, mood, poem, smoking, useless